ဒီဇင်ဘာ 7, 2020 - Austin Partners in Education
APIE သည် ၂၀၂၀ Austin စီးပွားရေးဆုကိုရရှိခဲ့သည်
ဤကျေးဇူးတင်လေးမြတ်သည့်အချိန်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၌အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကျောင်းသားများ၊ သူတို့၏စိတ် ၀ င်စားသောဆရာများ၊ ထူးခြားသော ၀ န်ထမ်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများနှင့်အတူလုပ်ကိုင်နေစဉ်နေ့စဉ်တွေ့မြင်နေရသောကောင်းသောအရာများကိုသတိရနေဆဲဖြစ်သည်။ ဟုတ်တယ်၊ ဒီစာသင်နှစ်ဟာကွဲပြားခြားနားလိမ့်မယ်၊ စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိမယ်ဆိုတာငါတို့သိခဲ့ကြပေမဲ့၊ ငါတို့အားလုံးဆက်လက်တည်မြဲရန်လိုအပ်သောမျှော်လင့်ချက်များစွာပေးသည်။
သင်၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် APIE သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကောလိပ်အဆင်သင့်ဖြစ်မှု၊ GEAR UP၊ သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြခြင်းနှင့်လမ်းညွှန်ခြင်းအစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်သောကျောင်းသားများကို virtual အထောက်အပံ့ပေးရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုသို့တက်လှမ်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 300 ကျော် virtual စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ APIE ၀ န်ထမ်းများသည် Zoom မှတစ်ဆင့်အပတ်စဉ်တက်ကြပြီးရာနှင့်ချီသော AISD ကျောင်းသားများကိုလမ်းညွှန်သင်ကြားခြင်းနှင့်နာရီပေါင်းထောင်ချီထောက်ပံ့ခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Austin ISD နှင့် CDC လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီလိုအပ်သရွေ့ကာလပတ်လုံး virtual ချဉ်းကပ်မှုဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်ပြင်ဆင်ထားသည်။ ကျောင်းနယ်မြေမှနောက်ဆုံးရအချက်အလက်များအတွက်သူတို့၏ Open for Learning သို့သွားပါ ဝဘ်ဆိုက်.
ကျဆုံးသောစာသင်ဒီဇင်ဘာလတွင်ပြီးဆုံးသွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းသည်ကျောင်းသားများအတွက်ဆက်လက်တက်လှမ်းရန်မျှော်လင့်လျက်ရှိပြီးနှစ်သစ်အတွက်ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည်။ သင်၏အကူအညီမပါဘဲဤအရေးကြီးသောအလုပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မလုပ်နိုင်ပါ။ စိန်ခေါ်မှုများကိုဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြောင်းလဲမှုတို့အတွက်အခွင့်အလမ်းများအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Virtual Volunteer Q & A
APIE ၏သမိုင်းတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်တွင် Austin outsideရိယာပြင်ပမှစေတနာ့ ၀ န်ထမ်းအမြောက်အများရှိသည်။ ၎င်းမှာ virtual volunteering ၏မမျှော်လင့်သောအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သည်။ ငါတို့ထွက်စစ်ဆေးပါ ဘလော့ဂ် ဟူစတန်မှဂျင်မ်ဟာရစ်နှင့်လင်ကွန်း၊ Nebraska မှ Uyen Pham တို့၏အဖြေများအတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြအစီအစဉ်နှင့်အတူ Austin ISD ကျောင်းသားများအတွက်မည်သို့ထူးခြားမှုရှိကြောင်းစေတနာ့ ၀ န်ထမ်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်လိုသည်ကိုလေ့လာပါ။ APIE ၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းအစီအစဉ်များကိုနွေ ဦး ရာသီ၌ virtual format ဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သင်ကစေတနာ့ ၀ န်ထမ်းမဖြစ်သေးလျှင်သင်ပိုမိုလေ့လာပြီးမှတ်ပုံတင်နိုင်သည် www.austinpartners.org.
ကျွန်ုပ်တို့၏ Austin မာရသွန်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့သို့ဆက်သွယ်ပါ
APIE သည် Austin မာရသွန်၏တရားဝင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့စာမျက်နှာသည်တိုက်ရိုက်ဖြစ်သည်! ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအဖွဲ့သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုအတွင်းရှိ APIE ကိုကူညီရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အသင်း ၀ င်ရန်စာရင်းသွင်းပါက၊ တိုက်ရိုက်ပွဲမကျင်းပပါကသင်၏အသင်းဝင်ဖြစ်ရန်မလိုပါကသင်၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်လာမည့်သုံးနှစ်တွင်ကောင်းမွန်လိမ့်မည်။ ပထမဆုံး $10,000 ရရှိသည့် Moody Foundation မှရက်ရက်ရောရောလိုက်ဖက်လိမ့်မည်။ တိုင်းလှူဒါန်းမှုရေတွက်! ပိုမိုလေ့လာသင်ယူပြီးကျွန်ုပ်တို့မှတ်ပုံတင်ပါ ရန်ပုံငွေရှာစာမျက်နှာ.
ကျောင်းသားများအတွက်တက်တက်ကြွကြွပါ ၀ င်မှုရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပါ
ကူးစက်ရောဂါစတင်ကတည်းက Austin Partners in Education မှကျောင်းသားများကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကောလိပ်အဆင်သင့်နှင့် GEAR UP အစီအစဉ်များကိုပြီးခဲ့သည့်မတ်လက virtual format ဖြင့်လျင်မြန်စွာချိန်ညှိခဲ့သည်။ ဆောင်း ဦး ရာသီစတင်ချိန် မှစ၍ အထက်တန်းကျောင်း ၇ ခုမှ Austin ISD ကျောင်းသား ၁,၂၀၀ ကိုနာရီပေါင်း ၁၇၀၀ ကျော်ပညာသင်ထောက်ပံ့မှုပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခြေပြုသင်္ချာစာသင်ခန်းနည်းပြခြင်းနှင့်လမ်းညွှန်ခြင်းအစီအစဉ်များသည်ယခုဆောင်း ဦး ရာသီတွင်လက်တွေ့ကျခဲ့သည်။ မင်းရဲ့ လှူဒါန်းခြင်းကြီးမားသည်ဖြစ်စေသေးငယ်သည်ဖြစ်စေကျောင်းသားများအားသူတို့ဆက်လက်အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည့်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အားပေးမှုများကိုအမြဲတမ်းတက်တက်ကြွကြွကူညီပေးလိမ့်မည်။
Target Circle မှတဆင့် APIE ကိုထောက်ပံ့ပါ
ယခုဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်မှစ၍ Target တွင်သင် ၀ ယ်သည့်အခါ Target Circle အစီအစဉ်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန်မဲပေးပါ။ ဒီမှာ။ Target သည်ဖောက်သည်မဲအပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်ထားသော Austin အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောဤမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အခွင့်အလမ်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံသူများအားကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသည်။ Austin ISD ကျောင်းသူကျောင်းသားများအားကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်ထောက်ပံ့နေသည့်အတွက်မဲအရေအတွက်တိုင်းသည်ရရှိနိုင်သည့်ရည်မှန်းထားသောရန်ပုံငွေများကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပေးသည်။ မမေ့ပါနှင့်၊ များများမဲများများရသဖြင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတွင်းသင်အကြိမ်ကြိမ်မဲပေးနိုင်သည်။